बालबालिकालाई निर्णय लिन सघाऔँ, लय आफैँ समाउँछन्
- रतन देवकोटा
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पश्चिम छेउमा छ– रोयल नेपाल गल्फ खेलमैदान । खेलमैदानभित्र एउटा पुरानो तथा साँघुरा टहरो छ । तपाईं हाम्रा लागि टहरो लाग्न सक्छ । तर, प्रतिमा शेर्पाका लागि त्यो टहरो होइन । त्यो त उनको जिन्दगीको उद्गम विन्दु हो । रंगीन सपना देख्न सिकाउने बलियो आधार र खुसीको सङ्गम हो ।
झण्डै १५ वर्षदेखि उनको परिवार यही टहरोमा बसोबास र काम गर्दै आइरहेको छ । उनका बुबा पासाङ शेर्पा खेल मैदानका सुरक्षागार्ड हुन् भने आमा कल्पना शेर्पा यही गल्फ (कोर्स) मैदानको रेखदेख गर्नुहुन्छ ।
प्रतिमा शेर्पा यही खेल मैदानमा जन्मिन् । तातेताते गर्दै हुर्किन् । देशदेशावरका मानिसहरूले गल्फ खेलेको देखिन् । देख्दादेख्दै उनमा पनि खेल्ने रहर जाग्यो । उनको रहर पूरा गर्नका लागि एक दिन पासाङले काठको लौरो बनाइदिए । लौरोसँगै प्रतिमामा लम्बियो एउटा विराट सपना ।
उनको सपनालाई हुरीले उडाउन सकेन । टहरामा तप्किने झरीले भिजाउन सकेन । तालु पोल्ने जेठ वैशाखको गर्मीले सुकाउन सकेन । न त हिउँदको चिसोले नै खुम्च्याउन सक्यो । समयक्रमसँगै उनले निरन्तर मिहिनेत गरिरहिन् । मिहिनेतले सफलताको समीपमा पुर्‍याउँदै लग्यो ।
सन् २०२० मा एसियाका ३० वर्षमुनिका ३० युवा प्रतिभाशाली व्यक्तिको सूचीमा परेकी प्रतिमा नेपालको एक मात्र खेलाडी हुन् । उनी फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको ३ सय जनाको सूचीमा २४औँ स्थानमा पर्न सफल भइन् ।
२१ वर्षीया प्रतिमा शेर्पाले छोटो समयमै धेरै सफलता प्राप्त गर्नुका पछाडि निश्चित कारण छन् । ती कारणलाई निम्न बुँदामार्फत प्रस्ट्याउने प्रयास गरेको छु ।
सिक्ने ठाउँ /वातावरण
खेल मैदानमै टहरा । टहराबाटै देखिने गल्फ संसार । दु:खी हुँदा पनि देखिने । खुसी हुँदा पनि देखिने गल्फ मैदान । सायद यो मैदानसामु उनी नभइदिएको भए प्रतिमा गल्फका लागि सायदै बन्थिन् होला । भनिन्छ, तपाईं हामी जे बनेका छौँ, हामी हाम्रो वरिपरिको परिवेश र वातावरणका परिणाम हौँ । हाम्रो सोच्ने शैली, हाम्रो रुचि, सपना र आवश्यकताका निर्धारक हाम्रा परिवेशहरू हुन् । हामीले आफ्ना नानीबाबुलाई जुन परिवेश र वातावरणमा हुर्काउँछौँ, त्यस्तै बाटोहरू बन्छन् । त्यस्तै भविष्यहरू बन्छन् । त्यस्तै परिणामहरू देखिन्छन् ।
माटोको स्तरअनुसार बिरुवाको भविष्य निर्धारण भएझैँ बालबालिकाका लागि माटो अभिभावक हुन् । बालबालिका हुर्किने परिवेश हो । उनले गतिलो ठाउँ पाइन् । बालबालिकाको सिकाइमा महत्त्वपूर्ण स्थान भनेकै घर र स्कुल हुन् । प्रतिमा गल्फ मैदानमै हुर्किएकाले उनको जीवनको दायरा र गन्तव्य त्यतैतिर ढल्कियो ।
बाल्यकाल सम्झिँदै उनी भन्छिन्, 'मेरा साथीहरू फुर्सदको समयमा गल्फ खेल्न आउँथे । उमेर बढ्दै गयो । परिवारको दबाब बढ्दै गयो । मेरा धेरै साथीहरूले गल्फ खेल्न आउनै छोडे । म त गल्फ मैदानमै बस्ने हुनाले मलाई खेल्न कसैले रोकेन । गल्फ खेलेर के हुन्छ र भन्नेहरू धेरै थिए । तर, ती भनाइहरू मेरा लागि बाधक बनेनन् । गल्फ मैदानभित्र मेरो बसोबास नभइदिएको भए मलाई आज प्रतिमा शेर्पा भनेर कसैले चिन्ने थिएन । र, म गल्फर पनि बन्ने थिइनँ ।'
ज्यालादारीमा जिन्दगी गुजार्ने पासाङ र कल्पनाले कुनै विश्वविद्यालयको शिक्षा पाउनुभएको छैन । तर, असल अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न सफल बन्नुभएको छ । शिक्षा पाउनु र जिम्मेवार हुनु फरक कुरा हुन् ।
प्रतिमाको रुचिलाई खुम्च्याउने होइन, सदैव फैलाउने ठूलो आधार बने उनका अभिभावक । र त आज गर्वले प्रतिमाकी आमा कल्पना भन्छिन्, 'कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो– छोरीको पढाइ बिग्रिन्छ कि ? तर, मैले छोरीलाई नखेल कहिल्यै भनिनँ । एक/दुई पटक यसले खेल्न छोडेकी पनि थिई । मैले खेल नानी भनिरहेँ । अहिले छोरीले गरेको प्रगति देखेर गर्व लाग्छ ।'
'खेलकुद तथा कलामा भविष्य छैन । जिन्दगी बर्बाद हुन्छ । म छोरीलाई इन्जिनियर बनाउँछु । म छोरालाई डाक्टर बनाउँछु भन्ने लाखौँ अभिभावकले आफ्नो नानीबाबुको रुचि र क्षमता के छ ? त्यसको पहिचान गर्दै थप सिक्नका लागि प्रोत्साहन गरेको विरलै पाइन्छ । धन्न ! खेलाडी बन्ने सपना बाेकेकी प्रतिमाले डाक्टर बन भन्ने अभिभावक पाइनन् । आर्थिक चुनौतीहरू हजार थिए । अप्ठ्यारो थियो । अझै पनि छ । तर, प्रतिमाले आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा डुबेर लाग्न सघाउने अभिभावक पाइन् ।
बालबालिका जे बन्न चाहन्छन् त्यही बन्न प्रोत्साहन गर्ने घर चाहिएका छन् । अभिभावक चाहिएका छन् । स्कुल चाहिएका छन् । समाज चाहिएको छ । तर, विडम्बना सन्तानको माध्यमबाट आफ्ना आकाङ्क्षा पूरा गर्न खोज्ने लाखौँ अभिभावक छन् ।
बालबालिकाहरू तपाईंहाम्रा अधुरा इच्छा, आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि जन्मिएका होइनन् । बालबालिकालाई हामीले निर्णय दिने पनि होइन । निर्णय लिन सघाइदिए पुग्छ ।
दीनदु:खीको निधारमा खेल कहाँ लेखिएको हुन्छ र ? जिन्दगी खेलेर कहाँ काट्न सकिन्छ र ? यो खेल छोरीका लागि उपयुक्त होइन, अरुका कुरा सुनेपछि पासाङ शेपालाई यस्तो महसुस नभएको होइन । तर, प्रतिमालाई रोक्ने आँट कहिल्यै गर्नु भएन । बरु पढाइका साथै गल्फलाई निरन्तरता दिन हौसला र प्रेरणा प्रदान गरिरहे ।
गल्फ खेलमा प्रतिमाले राम्रो मेन्टर पाइन् । गतिलो मेन्टरबिना गतिलो काम गर्न कठिन हुन्छ । विगत करिब १२ वर्षदेखि गल्फ खेलाडी सचिन भट्टराईको निरन्तर सहयोगले गर्दा उनलाई अगाडि बढ्न मद्दत गरिरहेको छ । असल, सहयोगी र भरपर्दो शिक्षक हरेक बालबालिकाले पाउन सकेको खण्डमा बालबालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रतिमा र गतिला शिक्षक सचिन भट्टराई हुन् । विद्यार्थीको सपना फराकिलो बनाउने शिक्षकहरू नै विद्यार्थीका महान् शिक्षकहरू हुन् । प्रतिमाका लागि महान् शिक्षक सचिन भट्टराई हुन् ।
त्यसो त 'गल्फ नखेल । पढाइ बिग्रिन्छ । परीक्षामा फेल भयौ भने कक्षामा नआउनू' भन्ने शिक्षकहरू प्रतिमाले कक्षाकोठामा नभेटेकी होइनन् । उनी भन्छिन्, 'सायद गल्फबारे उहाँहरूलाई त्यति थाहा नभएर पनि हुन सक्छ त्यसो भन्नुभएको । विद्यार्थीहरूको रुचि र क्षमतालाई पहिचान गरी थप सफलता हासिल गर्नका लागि शिक्षकले सघाइदिए पुग्छ । बाँकी आफ्नो बाटो विद्यार्थी आफैँले हिड्न सक्छन् ।'
आफ्नै मिहिनेत र धैर्यता
वातावरण भएर मात्रै हुँदैन । अभिभावक तथा शिक्षकको उत्प्रेरणाले मात्रै बालबालिकाले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनन् । स्वयम् व्यक्तिले आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा निरन्तर लगनका साथ मिहिनेत नगरेको भए प्रतिमा सायदै आजको स्थानमा हुन्थिन् होला । उनको लगनशीलता, सहनशीलता र गतिशीलताले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न र गल्फ प्रशिक्षण लिनका लागि उनलाई अमेरिकाको क्यालिफोर्नियासम्म पुर्‍यायो ।
निरन्तरको मिहिनेतले उनले दर्जनौँ गल्फ प्रतियोगितामा सफलता चुमिन् । त्यसैले हरेक व्यक्तिको सफलतासँग स्वयम् व्यक्तिको आदत जोडिएको हुन्छ भनिन्छ । प्रतिमाले मिहिनेतलाई आदत बनाउन सकिन् ।
उनी भन्छिन्, 'गल्फ मनको रञ्जनाका लागि मात्रै खेलिने खेल होइन, गल्फ त ध्यान हो, योगा हो र जीवनशैली हो ।' गल्फ प्रतिमाको जीवनशैली बनिदिएको छ । उनको दैनिक ३ देखि ५ घण्टा गल्फ अभ्यास गर्ने आदत नै बनिसकेको छ । झण्डै ७० वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गल्फ प्रतियोगितामा उनी सहभागी भइसकिन् । झण्डै ४० वटा प्रतियोगितामा उनले जित हासिल गरिसकेकी छिन् । यो जित उनको मात्रै होइन । देशको जित हो । नेपालको जित हो । माटोको जित हो ।
हुरीले टुक्की निभाएका रातहरू । झरीले भिजेका ओछ्यानहरू । चिसोले ननिदाएका आँखाहरू । घामले पोलेका जेठ, वैशाखहरू । एक जोर नयाँ जुत्ता किन्न, कुर्नुपरेका वर्षहरू । दु:खले भरिएका थिएनन् । यी त प्रतिमाका लागि सिकाइका महान् स्रोत थिए । प्रतिमालाई बलियो बनाउने आधार थिए । मिहिनेत गर्न सिकाउने अवसरहरू थिए ।
'खेलकुद तथा मनोरञ्जनमा भविष्य छैन । पढाइ बिग्रन्छ । केटीले गर्न सक्दैनन्' भन्ने मान्यतालाई चिर्न सफल २१ वर्षीया प्रतिमा नेपालको पहिलो महिला प्रोफेसनल गल्फर बनेर नेपालमा गल्फको विकास र विस्तार गर्दै महिलालाई सशक्त बनाउने उनको सुन्दर सपना छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक स्तर जस्तो भए पनि हरेक बालबालिकाले फक्रिने वातावरण, उत्साह, प्रेरणा र बाटो पाए भने फक्रिन अवश्य सक्छन् । उनीहरूले आफ्नो भविष्यको बाटो देखाउने गतिला शिक्षक र अभिभावक पाएको खण्डमा हरेक बालबालिका प्रतिमा शेर्पाजस्तै समाजका जुनैसुकै क्षेत्रमा पनि अब्बल ढंगले प्रस्तुत हुन सक्छन् ।
बालबालिकाहरू तपाईंहाम्रा अधुरा इच्छा, आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि जन्मिएका होइनन् । बालबालिकालाई हामीले निर्णय दिने पनि होइन, निर्णय लिन सघाइदिए पुग्छ । अनि त उनीहरूले आफ्नो लय आफैँले समाउँछन् । प्रतिमा शेर्पाको कथा अभिभावक तथा शिक्षकका लागि ठूलो पाठ हो ।
पूरा कथा हेर्नका लागि यो लिकंमा जानुहोस्:
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत १६, २०७७, १२:५०:००
दोलखामा जिप दुर्घटना, ४ जनाको मृत्यु2min read